माओवादीबाट को को बन्दैछन् मन्त्री ? प्रभावशाली मन्त्रालयमै मात्रै आँखा लगाउन थालेका कारण पार्टीमा तानव – Etajakhabar
माओवादीबाट को को बन्दैछन् मन्त्री ? प्रभावशाली मन्त्रालयमै मात्रै आँखा लगाउन थालेका कारण पार्टीमा तानव
काठमाडौं – माओवादीभित्र मन्त्री बन्ने आकांक्षीको सूची लामै छ। आकांक्षीको सूची बढ्ने मात्र होइन, सरकारमा पठाउन खोजिएका नेताहरूले पार्टीको भागमा पर्ने प्रभावशाली मन्त्रालयमै मात्रै आँखा लगाउन थालेका कारण पनि मन्त्रीहरूको विषयमा माओवादी टुंगोमा पुग्न सकेको छैन।
एमाले–माओवादीबीच अर्थ एमाले र गृह माओवादीले लिने गरी समझदारी भएका कारण गृहमा माओवादीभित्रै आकांक्षी बढी देखिएका हुन्। जसकारण अध्यक्ष दाहालसमेत प्रेसरमा छन्। गृहमा सरकारको नेतृत्व गर्ने तयारीमा रहेका थापा र वर्षमान पुनको बढी जोड देखिन्छ। दाहाल थापाको नेतृत्वमा वर्षमानलाई पनि सरकारमा पठाउन चाहन्छन् तर दुवैको गृहमा दाबी रहेका कारण उनलाई निर्णयमा पुग्न अप्ठ्यारो परिरहेको छ। अन्नपूर्ण पोस्टमा खबर छ ।
प्रकाशित मिति: शुक्रबार, फाल्गुण ११, २०७४ समय: २:०५:२४